Shir ku saabsan siyaasadda Qaran ee Maareynta Musiibooyinka oo Muqdisho ka furmay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shir ku saabsan siyaasadda Qaran ee Maareynta Musiibooyinka oo Muqdisho ka furmay
Shir ku saabsan siyaasadda Qaran ee Maareynta Musiibooyinka oo Muqdisho ka furmay
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka soconaya shirka siyaasadda Qaran ee Maareynta Musiibooyinka,iyadoo Mas’uuliyiinta Wasaaradda gargaarka iyo maareynta Masuubiiyinka Qaranka ay shirkaasi fureen.
Munaasibadda daahfurka shirkan waxaa ka qeybgelaya mas’uuliyiinta Wasaaradda,madax ka kala socotay hay’adaha kale ee dowladda iyo xubno ka socda Caalamka iyo hay’daha samafalka ee ka howlgala Soomaaliya,iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan saameynta abaarihii dalka ku dhuftay.
In tii ay socotay Xafladda ayaa mas`uuliyiinta Wasaarada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxay ku soo bandhigeen Abaarihii iyo musiibooyinkii kale ee dalka ka dhacay,iyagoo xusay in abaartii dalka ka dhacday Sanadkii aan kasoo gudubnay ay ay ku dhinteen 250,000 oo ruux ayadoona sidoo kale reebtay Saameyn in taas ka badan.
Mas’uuliyiinta Wasaarada ayaa sidoo kale warbixintooda ku sheegay in 6bil gudaheed muqdisho ay ka kaceen 10 dab oo ay ka dhasheen qasaaro Naf iyo Maal leh,kuwaasi o qeyb ka ahaa musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee saameeyey bulshada.
Waxaa sieyn loo falan qeeyey sidii loo heli lahaa wadiiqooyin sahlaya in laga gaashaanto in abaaruhu ay soo laa laabtaan,iyadoo lala kaashanayo hay’adaha Caalami ah.
Previous articleHogaamiyaasha Maamul gobaleedyada oo Dhuusamareeb ku qulqulaya
Next articleWarbixin: Itoobiya oo Xabsiyada ka sii daynaysa 528 qof